Blogs: भेच (Vetch) Vicia sativa घाँस सम्बन्धि जानकारी!!
भेच (Vetch) Vicia sativa घाँस सम्बन्धि जानकारी!!
परिचय : भेच घाँसको खेती नेपालका तराई तथा मध्य–पहाडी जिल्लाहरूमा सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । यो घाँसको बीउ झण्डै मासको बीउ जस्तै र घाँस चाहिँ मसुरो वा कुटिलकोसासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । कोसे घाँस भएकाले यो पोषिलो हुन्छ । यसले एक हेक्टर खेती गरिएको जमिनमा ११० के.जी.सम्म नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्न सक्दछ । भेचलाई हरियो मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । भेचको बीउमा ‘साइनोजेनिक एमिनो एसिड’ पाइन्छ । यसैले भेचको बीउलाई पशु आहाराको रूपमा धेरै मात्रामा खुवाउनु हुन्न । यसको स्वाद केही टर्रोहुने भएकाले सुरूमा भेचमात्र पशुबस्तुले रूचाएर खाँदैनन् । त्यसैले अन्य घाँसहरूसँग मिसाएर खुवाउनु आवश्यक हुन्छ ।
हावापानी : यो उष्ण तथा समशितोष्ण हावापानीमा हुने कोसे घाँस होे । यसले २० देखि ४० डि.से. तापक्रममा राम्रो उत्पादन दिन सक्दछ ।
माटो : निकासको राम्रो व्यवस्था भएको जुनसुकै माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ तर बलौटे दोमट माटो बढी उपयुक्त हुन्छ । अम्लीय पना बढी भएको तथा पानी जम्ने स्थान यसका लागि उपयुक्त हुँदैन ।
लगाउने समय : यसको बीउ असोजदेखि कात्तिकसम्म छर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जातहरू : नोमाइ र पपनी यसका नेपालमा खेती गरिने जातहरू हुन् ।
पौष्टिक तत्वहरू प्रतिशत
कच्चा प्रोटिन ११.३९
मलखाद : साधारणतयाः प्रतिहेक्टर पाँच–छ टन कम्पोष्ट, २५ किलोग्राम नाइट्रोजन, ६० किलोग्राम फस्फोरस र ३० किलोग्राम पोटास राख्न सकेमा यसबाट घाँसको बढी उत्पादन लिन सकिन्छ । भेचलाई पहिलो पटक नयाँ जग्गामा छर्नुपर्दा जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
प्रसारण : भेच घाँसलाई बीउबाट प्रसारण गरिन्छ ।
बीउ दर : यसका लागि प्रतिहेक्टर ३५–४० के.जी. बीउ आवश्यक पर्दछ । जैसँग मिस्रित बाली लगाउने भएमा बीउ आधा कम गरे पनि हुन्छ ।
रोप्ने दूरी : भेच प्रायः छरूवा विधिद्वारा नै लगाइन्छ यदि लाइनमा लगाउनु परेमा हारदेखि हारको दूरी २५ से.मी. र बिरूवा देखि बिरूवाको दूरी १० से.मी.दिएमा बिरूवाको बृद्धि र विकास राम्रो हुन्छ ।
कटाइ : घाँसको बीउ लगाएको ६० दिनपछि पहिलो कटाइ लिन सकिन्छ । त्यसपछि सिजनमा तीन–चार कटाइ सम्म घाँस लिन सकिन्छ ।
सिँचाइ : माटोमा चिस्यानको अवस्था हेरी बीउ छरेपछिको एक–एक महिनाको अन्तरालमा सिँचाइ दिन सकेमा बढी उब्जा लिन सकिन्छ ।
रोग तथा कीरा : भेचमा त्यति रोग तथा कीराहरू लाग्दैनन् ।
उत्पादन : बीउ छरेको ५०–६० दिनपछि यसको पहिलो कटाइ लिन सकिन्छ । एकल बाली लगाएको स्थानबाट प्रतिहेक्टर ४०–५० टन हरियो घाँस उत्पादन हुन्छ ।